🥇 ▷ Samsung Galaxy S10 waa la cusboonaysiiyay oo ay ku jiraan howlaha qoyska Galaxy Note 10 ✅
Samsung Galaxy S10 waa la cusboonaysiiyay oo ay ku jiraan howlaha qoyska Galaxy Note 10
Horay waxaa jiray dhowr cusbooneysiin ah oo gaaray Samsung qoyska Galaxy S10 si loo wanaajiyo howlihiisa, saxo khaladaadka ama loogu daro suurtagal cusub. Munaasabadan dhamaan Galaxy S10 ooy kujiraan Galaxy S10e, waxay helayaan a patch cusub oo ku daraya astaamaha kuwaas oo ilaa immika ka gaar ahaa Galaxy Note 10 iyo Galaxy Note 10 Plus oo ay ku jiraan Dex PC.
Inta lagu gudajiro nolosha calanka Samsung, cusboonaysiinta ayaa si joogto ah u dhaca. Way u fududahay isaga inuu dhammeeyol sifiican ayaan u fiicnaadaa waxyar kadib, maadaama kooxda kombuyuutarrada ee Samsung aysan dhameystirin howlahooda marka uu Terminalka uu sii socdo, laakiin waxay ka shaqeeyaan dhammaan noocyada waxqabadka iyo hagaajinta shaqada. Tusaale waxaa kujira qeybta ugu dambeysa ee shirkada Kuuriya ay u soo bandhigeyso Galaxy S10, Galaxy S10 Plus iyo Galaxy S10e
Muuqaalada cusub ee kamarada
Cusboonaysiinta waxaa lagu sii daayay noocyada firmware G970FXXU3ASIG, G973FXXU3ASIG iyo G975FXXU3ASIG oo loogu talagalay Galaxy S10e, Galaxy S10 iyo Galaxy S10 Plus siday u kala horreeyaan. Hagaajinta iyo isbeddelada ayaa sheegaya faahfaahinta in saddexda koox ay helaan howlo cusub sida Live Diirad, Video Diirad Deg Deg ama Habeen Habeen ah Kaameeraha hore, AR Doodle iyo Super deggan oo duuban. Xaaladda Live Focus, oo horeyba ugu jirtay Galaxy S10, waxay ku dartay hawl cusub oo diiradda lagu saarayo oo loo yaqaan “Glitx Live” oo keliya oo lagu soo bandhigi lahaa Galaxy Note 10. Qaabka Live Focus, dhinaca kale, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad xajiso shay dhaqaaqaya ayaa diirada saarey markii la duubayo fiidiyaha. Si la mid ah, howsha DeX ee kumbuyuutarka iyo shaashadda Dynamic Lock waxay gaarayaan taxanaha oo dhan Galaxy S10
Patch sidoo kale waxaa ku jira casriyeynta Amniga Android Sebtember 2019. Sidaa darteed waa mid ka mid ah cusbooneysiinta ugu muhiimsan ee lasii daayay ilaa maanta oo loo yaqaan ‘Galaxy S10 Waxaan ognahay in casriyeynta ay ku socoto dhinaca OTA laga bilaabo Jarmalka, sidaa darteed ma ahan inay qaadato waqti dheer in lala gaaro suuqyada kale ee ay ku yaalaan marinnada ay ku jiraan Spain. Haddii aad leedahay mid ka mid ah saddexda Galaxy S10 waad hubin kartaa haddii cusboonaysiinta laga heli karo menu dejimaha oo adoo aadaya nidaamka cusboonaysiinta nidaam-hoosaadka.